Ukuzikhusela kunye Neengxaki Zokuziphatha - Khetha Uphawu
Ukuzikhusela kunye Neengxaki Zokuziphatha
Ukuzikhusela yimeko apho izithunzi zethu ezinzulu zifihla, njengoko Mars kwaye ISaturn ukukhonza ukusikhusela kulo lonke ubukho bethu eMhlabeni. Zombini ezi zidalwa zikhohlakeleyo zinamandla okusigcina sikhuselekile ngeendlela ezininzi, kumaqhina obuqu kunye nokungena ngokudibeneyo kunye neemeko kwihlabathi lethu langaphakathi elibuthathaka. Ngelixa sithetha kakhulu ngokulandela i Inyanga , IVenus kwaye Jupiter kwindlela yabo ecocekileyo yokubonakalisa, umzamo unokusisusa kwinzuzo yokwakha isakhiwo sethu ngaphandle koloyiko, ngamanye amaxesha usigcina sibophekile ukujikeleza kwizangqa ezifanayo, ukuphindaphinda ubomi de sibambe izithunzi zethu.
Ubutyala kunye nehlazo
Ingxaki yokwazi ukuzikhusela ngokwayo ivela kwityala kunye neentloni. Beza ngeVenus kunye ne Ilanga , kuxhomekeke kubudlelwane babo kunye neeplanethi ze-maleficent kwitshathi yomntu. Xa iVenus icelwa umngeni ngakumbi kwaye neLanga lomelele, umntu uya kuba nesibindi asebenze ngaphandle kodwa rhoqo abuyele enetyala kwaye enze idini ukuze achache ngenxa yezenzo ezingafanelekanga. Xa iLanga lethu libuthathaka kwaye iVenus inamandla kwaye inamandla, sivame ukufuna ibhalansi kwisiphelo esiphantsi somlinganiselo, sibaleka ngokuzigxeka kwaye sihlala siziva sineentloni ngenxa yokungakwazi ukujamelana nehlabathi okanye ukuzizisa ekukhanyeni. Xa becelwa umngeni ngokulinganayo, okanye bomelele ngokulinganayo, siya kuyibona le miba ithungelana njengoko kungelula ukwahlula umba omnye ukuze kusetyenzwe kwaye kupholiswe.
Ukhuseleko Lwethuku-Isizathu kunye nesiphumo
Inkathazo yexesha elide apha ngokuyinhloko ngumxholo weSaturn, oza njengesiphumo somda wethu wemvelo obekwe kwi-Mars. Ngengqiqo esebenzayo, oku kusibeka ehlazweni nakwimeko apho singenako ukumenzakalisa omnye umntu, nokuba sele esenzakalisa, ngenxa yeemvakalelo ezinzulu zokuziva sinetyala okanye zokuzigweba neentloni eziza emva kokuba sibeke umda. Le mvakalelo iyasibeka kuthi kwaye njengoko sikhula, sifunda njengeempuku ukuba akufuneki siphinde into ethe yazisa loo mifanekiso imbi kwasekuqaleni. Enye yezona zinto zibalulekileyo esizifunda kulo naluphi na uhlobo lonyango ( Pluto kwaye Neptune ) iza ngokuqondwa kolwazi ukuba lilungelo lethu ukumisela imida yethu, kwaye ukhuselo lwethu enyanisweni lusempilweni. Kwinqanaba lomntu, oku kuthetha ngokusisiseko ukukwazi kwethu ukwamkela iMars kunye neSaturn ngendlela ecocekileyo, enye isinika ithuku lokuhlala sikhuselekile, kwaye enye isinika ilungelo. Asinakuzazi ngokusengqiqweni okanye silawule iinkcukacha zokuba siyinxalenye enkulu ngakumbi.
Umthwalo woxanduva uhlala ungabonakali, njengetoni yelitye ecinezela iintliziyo zethu ukuba ngamnye wethu aqhele ukuthwala ubomi bakhe bonke njengento engenakuthintelwa kunye neqhelekileyo yeemvakalelo. Oku kuvela kukhuseleko esilubeka kuthi, sizigcine sikude ekwenzakaleni ngokungajongani nako. Ngelixa abaninzi besithi sifanele sijonge ngaphakathi okanye sijike ngaphakathi, asilonyathelo lilula kangako ukulithabatha, njengoko lifuna ukunyaniseka nobukroti obungaphezu kwawo nawuphi na umlo omnye umntu okanye imeko enokuthi yenziwe.
Kanye njengokuba iNyanga kunye nokudibana kwayo nothando oluNgcwele kuphilisa konke, kunjalo nendlela yethu yokwenza izinto zemihla ngemihla. Ngokwenene la ngamacala amabini engqekembe enye, kwaye zombini iMars kunye neSaturn zifuna ukuba sizinakekele KULO kuzalwa, apha kwaye ngoku, sisebenzisa ubudlelwane bethu kwiimbopheleleko zemihla ngemihla ngokubhekiselele kumzimba wethu. Ukuqala ngoxanduva olusempilweni, kufuneka siqale ngoxanduva esinalo lwemeko yethu yenyama, kwaye ngelixa uninzi lweempembelelo ezihlangeneyo nezookhokho zisenza sigule, silambe okanye singalungelelani, kufuneka senze loo manyathelo mancinci okuzikhathalela enza umahluko. kwaye sizingce ngabo njengoko sihamba. Lo mceli mngeni awusoloko ulula, kuba nolona tshintsho luncinci olwenziweyo kwindlela yethu yomzimba lunokubangela imiba emininzi yomsindo okanye usizi-zonke ezo zinto singazange sijongane nazo kwaye sizame ukuzingcwaba sisebenzisa iindlela ezingafanelekanga.
Nangona kunjalo, usuku, ezimbini okanye ezilishumi elinambini, sinokuzingca ngokuzama, sisazi ukuba sisebenza kwimiba yethu enzulu yokungazi. Ukuntywila nzulu kufanelekile ukuqondwa, kwanokuba sikwenza oko okwexeshana nje elifutshane. Thatha imizuzu yakho emihlanu ukucamngca okanye ukwenza isaladi, usele iiglasi ezininzi zamanzi ahlambulukileyo, kwaye uqaphele ukuba nangona ungaphindi oku ngomso, usenzile into enhle ekuhambeni kwexesha.
Aries Gemini Virgo Isagittarius Itaurus